Faransiiska oo beeniyay in Islaamiyiinta Mali ay dib u qabsadeen magaalada Konna – idalenews.com
Faransiiska oo beeniyay in Islaamiyiinta Mali ay dib u qabsadeen magaalada Konna
Dowladda Faransiiska ayaa beenisay sheegashada Kooxaha Islaamiyiinta ee ahaa inay dib u qabsadeen magaalada Konna, kadib markii khamiistii Mucaaradka la wareegeen, balse howl galkii jimcihii uu bilaabay Faransiiska dib looga riixay.
Kolonyo Ciidamada Faransiiska oo wehliya kuwa Mali ayaa ka baxay Caasimada Bamako, si ay uga qeyb qaataan dagaalada ka socda Waqooyiga, iyadoo Islaamiyiinta ay isu diyaarinayaan dagaalo ay la galaan.
Afhayeen u hadlay dowladda Mali ayaa sheegay in magaalada Konna ay ku sugan yihiin, hase ahaatee goob joogayaal ayaa sheegaya in aanay wali magaalada cidna ku sugneyn.
Xalay Diyaaradaha dagaalka faransiiska ayaa waxay duqeyn u geysteen magaalada Gao ee waqooyiga ku taal, halkaasoo ay ku xoogan yihiin Islaamiyiinta, iyadoo saldhigyo ay leeyihiin la duqeeyay.
Taliyaasha Ciidamada ka socda dalalka Galbeedka Afrika ayaa diyaarinaya ciidamo loo diro waqooyiga, si ay uga qeyb qaataan, waxaana Ciidamada hogaaminaya Taliye ka tirsan Ciidamada Nigeria ee howl galka ka qeyb qaadanaya.
Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay in howl galkeeda uu xadidnaan doono, isla markaana uu ku siman yahay muddo todobaad, hase ahaatee waxaa suura gal ah in dagaalka uu dheeraado.
Jabhada Tuareg ayaa sheegtay inay ka qeyb qaadan doonto dagaalka Islaamiyiinta iyo Faransiiska, waxaana jabhadan ay ku xoogan tahay dalalka Niger, Mauratania iyo Waqooyiga Mali, kuwaasoo horaantii sanadkii hore ku dhawaaqday gooni u goosad.
Madaxweynaha Soomaaliya oo maalinta berri kula kulmaya Washington Hillary Clinton
AMISOM oo sheegtay inay baareyso dad rayid ah oo shalay lagu laayay deegaanka Leego